Kedu ihe ọ bụ, otu esi akpụ ya na njirimara nke glacier | Network Meteorology
Na mgbasa ozi anyị na-ahụ mgbe niile na glaciers na-apụ n'anya n'ihi mgbanwe ihu igwe. A glacier bụ nnukwu uka nke abịakọrọ ice na-etolite n'ime ọtụtụ puku afọ. Ọ bụ ihe na-ewe ogologo oge iji wuo ya na-apụ n'anya n'ime ọtụtụ iri afọ. Ndị glaciers nwere ikike dị omimi iji mụọ ma ha dị oke mkpa na mbara ala.
Ga-achọ ịma ihe niile metụtara glaciers na mkpa ha nwere?
1 Njirimara nke glacier
2 Glacier Ọnọdụ
4 Akụkụ nke glacier
5 Gladị glaciers
Njirimara nke glacier
Dị ka e kwuru na mbụ, snow na-agbakọba afọ site n'afọ ruo n'ígwé. A na-ejikọ ọkwa ndị a site n'ibu ha na ọrụ nke ike ndọda. Ọ bụ ezie na ha bụ otu n'ime ihe kachasị ukwuu na mbara ala, glaciers na-agagharị. Ha nwere ike jiri nwayọọ nwayọọ na-asọ dị ka osimiri wee gafere n’etiti ugwu. N'ihi nke a, enwere ụdị ugwu dị iche iche nke sitere na mmegharị nke glaciers.
Na okpomoku zuru ụwa ọnụ, ịdị adị nke glaciers na-agbada n’ike n’ike. Ha bụ nnukwu isi iyi mmiri dị mma na mbara ụwa, tinyere osimiri na ọdọ mmiri. A na-ahụ glacier dị ka ugwu nke Ice Age ikpeazụ. Nke a bụ n’ihi n’agbanyeghi na okpomoku dị elu, ha agbazebeghị. Ha enweela ike ilekọta onwe ha ruo ọtụtụ puku afọ ma mezuo ọrụ ebumpụta ụwa ha. Mgbe Ice Age biri, okpomọkụ dị elu na mpaghara ndị dị ala mere ka ọ gbazee. Mgbe ha nwusịrị, ha ahapụla ọdịdị dị egwu dịka ndagwurugwu U.
Taa, anyị nwere ike ịchọta glaciers na ugwu ugwu nke kọntinenti niile, ewezuga Australia. Anyị nwekwara ike ịchọta glaciers n'etiti latitude 35 Celsius n'ebe ugwu na 35 Celsius n'ebe ndịda. Agbanyeghị na enwere ike ịhụ glaciers naanị na Ugwu Rocky, na Andes, na Himalayas, na New Guinea, Mexico, East Africa na Ugwu Zard Kuh (Iran).
Ọ bụrụ na anyị agbakọta glaciers niile dị n'ụwa, ha na-etolite 10% nke mkpokọta ala. Mgbe ọtụtụ ọmụmụ gasịrị, a kwubiri na 99% nke glaciers niile na-eme ya na ice ice polar site n'akụkụ abụọ ahụ. Nke a bụ n'ihi na alụlụ mmiri dị na mbara igwe na-agagharị n'ụwa niile. Karịsịa na Antarctica na Greenland ị nwere ike ịchọta akwa mmiri si n'akụkụ abụọ.
Glasia na-etolitekarị na mpaghara ugwu dị elu na mpaghara polar. Maka glacier na-etolite, ị ga-achọ obere okpomọkụ n'afọ niile na ọdịda dị n'ụdị snow. N’oge dị ọkụ karị, ice akakọkọtara na-amalite ịgbaze ma na-agafe glacier na ala. Mgbe mmiri mmiri na-agbakọta na ala nke glacier, ọ na-agafe na ya na ntụziaka nke mkpọda. Mmagharị a nke mmiri mmiri na-eme ka glacier niile na-akwagharị.
A na-akpọ glaciers ugwu alpine glaciers na ndị nke okporo osisi okpu ice. Mgbe ha weputara mmiri meltwater site na okpomoku di elu n'oge oku, ha na emeputa aru di nkpa nye osisi na osisi. Tụkwasị na nke ahụ, a na-enye ọtụtụ obere obodo mmiri site na mmiri kpụkọrọ akpụkọ. Mmiri dị na glaciers dị nke ukwuu nke na a na-ewere ya dị ka nnukwu nchekwa nke mmiri dị mma na mbara ala. O nwere ụzọ atọ n'ụzọ anọ, karịa osimiri na ọdọ mmiri.
Igwe mmiri kpụkọrọ akpụkọ na-amalite ịmịpụ mgbe snow dara na-aga n’ihu ma na-adịgide adịgide n’afọ niile. Ọ bụrụ na snoo dara adapụtaghị n’oge ọkọchị, ọ ga-adịgide nke ọma n’afọ ọzọ. Mgbe oge oyi malitere, snow ọzọ na-ada nke a na-edowe ya n’elu, na-ebu ya ibu ma na-akpụ akwa ọzọ. Mgbe afọ ndị sochiri, ndị compact snow n'ígwé na-etolite glacier na-enwetara.
The snowflakes na-ada na ugwu na ha na-compressing gara aga n'ígwé na a na-aga n'ihu ụzọ. Mkpakọ na-eme ka ọ na-etikwa mkpu ọzọ, dị ka ikuku dị n'etiti kristal ahụ na-ebelata. Kristal ice na-ebuwanye ibu. Nke a na - eme ka igwe igwe kọwaa ma mee ka ọ bawanye. N'oge ụfọdụ ebe ọ kwụsịrị ịba ụba, nrụgide nke ịdị arọ nke ice ahụ bụ na ọ na-amalite ịmịda ala. Nke a bụ otu ụdị mmiri nke na-agafe na ndagwurugwu.
Igwe glasia ruru n’iru mgbe otutu snow nke echekwara bu ihe na agbaze. N'ụzọ dị otú a, ọ nwere ike ịnọ n'otu nkwụsi ike ruo ogologo oge. Ọ bụrụ n ’inyocha ya kpamkpam, ị ga - ahụ na n’elu akara dị n’etiti, ị ga - enweta oke karịa ka ị ga - efu na n’okpuru ị tufuru ihe ị nwetara. Maka glacier ga-ezu oke ihe karịrị otu narị afọ nwere ike ịgafe.
Ihe glacier nwere akụkụ dị iche iche.
Mpempe akwụkwọ. Ọ bụ ebe kachasị elu ebe snow na-ada ma na-agbakọta.
Mpaghara mgbatị. Na mpaghara a, usoro nke njikọta na evaporation na-ewere ọnọdụ. Ọ bụ ebe glacier rutere n'ọnọdụ dị n'etiti mmụba na ọnwụ nke oke.
Gbawara. Ha bụ ebe glacier na-agba ọsọ ọsọ.
Moraine. Ndị a bụ ìgwè ndị gbara ọchịchịrị guzobere site na sedimenti na-etolite na nsọtụ na elu. A na-echekwa nkume ndị glacier dọkpụrụ na-etolite na ebe ndị a.
Ọnụ. Ọ bụ akụkụ dị ala nke glacier ebe snow chịkọbara na-agbaze.
Dabere na ebe na ọnọdụ nke e guzobere, e nwere ụdị glaciers dị iche iche.
Glacier Alpine. Dị ka e kwuru na mbụ, ha bụ ndị na-etolite n’ugwu ndị dị elu.
Circus glacier. Ha bu uzo mebere ebe mmiri na-achikota.
Ọdọ mmiri Glacial. A na-akpụ ha site na mmiri mmiri dị na ndagide nke ndagwurugwu glacial.
Ndagwurugwu glacier. Ọ bụ usoro ihe ọmụmụ banyere ala nke mmiri na-aga n'ihu site na ọrụ nke ikuku na-aga n'ihu. Nke ahụ bụ ịsị, mpaghara ọ bụla ice na-akpụgharị ebu ma nweta ọdịdị.
E nwekwara ụdị glaciers ndị ọzọ na-adịchaghị adị Inlandsis, Drumlins, Lakes Excavation, Glacier dị na Foothill na glacier.
Glaciers bụ usoro dị mgbagwoju anya nke okike nke nwere nguzo siri ike na ọrụ dị mkpa maka ndị dị ndụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedu ihe bụ, olee otu esi akpụ ya na njirimara nke glacier
Kedu ihe blizzard na kedu ka ọ si eme